Bissell 15D1 श्रृंखला सजिलो स्वीप उपयोगकर्ता गाइड - पुस्तिका
Bissell 15D1 श्रृंखला सजिलो स्वीप उपयोगकर्ता गाइड
पोस्टएक्सेलसीयर मार्च 21, 2021 अप्रिल 9, 2021
1 टिप्पणी Bissell 15D1 श्रृंखला ईज़ी स्वीप प्रयोगकर्ता गाइडमा
घर » बिस्सेल्ल » Bissell 15D1 श्रृंखला सजिलो स्वीप उपयोगकर्ता गाइड
Bissell 15D1 श्रृंखला ईज़ी स्वीप
1 महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशनहरू
2 उत्पादन हेर्नुहोस्
5 मर्मत र हेरचाह
7 उपभोक्ता ग्यारेन्टी
8 उपभोक्ता हेरचाह
10 सम्बन्धित मैन्युअलहरू
महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशनहरू
तपाईंको स्वेपर प्रयोग गर्नु अघि सबै निर्देशनहरू पढ्नुहोस्।
विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा, आधारभूत सावधानीहरू अवलोकन गरिनु पर्छ, निम्न सहित:
आगो, इलेक्ट्रिक शक वा चोट को जोखिम कम गर्न:
कपाल, छाडा कपडा, औंलाहरु, र शरीर को सबै भागहरु खोल्ने र भाग को भागहरुबाट टाढा राख्नुहोस् ब्रश रोल घुमाउन जारी छ जब प्रयोगमा छ।
ब्रश रोल टर्न अन जारी छ, जबकि उत्पादन खोल्दा र ह्यान्डल प्रयोगमा छ। कालीन, रगहरू, फर्निचर र फ्लोरिंगलाई नोक्सानबाट बचाउन क्लीनर टिप गर्ने वा यसलाई फर्निचर, फ्रिन्ज्ड एरिया रगहरू, वा कारपेटि st सिढीहरू उपकरण प्रयोगको बेलामा राख्ने नगर्नुहोस्।
ब्रश रोल अनको साथ, क्लीनरलाई एक लामो समयको लागि एक स्थानमा बस्न नदिनुहोस्, किनकि भुइँमा हुने क्षतिको परिणाम हुन सक्छ।
भिजेको सतहमा प्रयोग नगर्नुहोस्।
खेलौनाको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति नदिनुहोस्।
नजिक ध्यान जब बच्चाहरू द्वारा वा नजिक प्रयोग गरिन्छ आवश्यक छ।
उनीहरू उपकरणसँग खेल्ने छैनन भनेर निश्चित गर्न बच्चाहरूको सुपरिवेक्षण गरिनु पर्छ।
प्लास्टिक फिल्म खतरनाक हुन सक्छ। दम घुट्ने खतराबाट बच्न, बच्चाहरूबाट टाढा राख्नुहोस्।
पानी वा तरलमा डुबाउने नगर्नुहोस्।
यस प्रयोगकर्ता गाईडमा वर्णन गरिएको बाहेक अरू कुनै उद्देश्यको लागि प्रयोग नगर्नुहोस्।
केवल निर्माताको सिफारिश संलग्नहरु प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि उपकरणले काम गरिरहेको छैन भने यसलाई छोडियो, छोडियो, क्षति भयो, घरबाट बाहिर छोडियो, वा पानीमा खसालियो भने, यो एक अधिकृत सेवा केन्द्रमा मर्मत गरिएको छ।
बाहिर युनिट चार्ज नगर्नुहोस्।
उपकरणलाई जलाउनु हुँदैन यदि यसले गम्भीर रूपमा बिग्रेको छ। ब्याट्रीहरू आगोमा विस्फोट हुन सक्छ।
खोल्नमा कुनै वस्तु नराख्नुहोस्।
कुनै पनि खोलिएको ब्लकको साथ प्रयोग नगर्नुहोस्।
उद्घाटनलाई धूलो, लिन्ट, कपाल र वायुप्रवाहलाई कम गर्न सक्ने केहि पनि रहनुहोस्।
सीढी सफा गर्दा अतिरिक्त सावधानी प्रयोग गर्नुहोस्।
ज्वलनशील पदार्थहरू (हल्का तरल पदार्थ, पेट्रोल, केरोसिन, इत्यादि) लिनुहोस् वा विस्फोटक तरल पदार्थ वा बाफहरूको उपस्थितिमा प्रयोग नगर्नुहोस्।
यस उपकरणलाई जडान गर्नुहोस् वा मोटार गरिएको नोजल जडान विच्छेद गर्नु अघि जहिले पनि बन्द गर्नुहोस्।
विषाक्त सामग्री (क्लोरीन ब्लीच, अमोनिया, ड्रेन क्लिनर, इत्यादि) लिनुहोस्।
तेल आधारित पेन्ट, रंग पातलो, केही कीट-प्रूफिंग पदार्थ, ज्वलनशील धुलो, वा अन्य विस्फोटक वा विषाक्त वाफेरले भरिएको बाफले भरिएको बन्द गरिएको ठाउँमा सफाफर प्रयोग नगर्नुहोस्।
कडा वा तीखो वस्तुहरू जस्तै काँच, नेलहरू, स्क्रू, सिक्का, इत्यादि नगर्नुहोस्।
जलेको र धुम्रपान गर्ने कुनै पनि चीज लिनुहोस्, जस्तै सिगरेट, खेलहरू वा तातो खरानी।
ठाउँमा डर्ट बिन वा फिल्टर बिना प्रयोग नगर्नुहोस्।
केवल सुक्खा, इनडोर सतहहरूमा मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।
उपकरणलाई सतहमा राख्नुहोस्।
सफाई वा सर्विसिंग गर्नु अघि ब्याट्री प्याक विच्छेद गर्नुहोस्।
यदि चार्जर आपूर्ति केबल बिग्रिएको छ भने, यसलाई जोखिमबाट बच्न उत्पादक, यसको सेवा एजेन्ट वा यस्तै योग्य व्यक्तिले बदल्नु पर्छ।
केबल द्वारा चार्जर तान्न वा नलार्नुहोस्, ह्यान्डलको रूपमा केबल प्रयोग गर्नुहोस्, केबलमा ढोका बन्द गर्नुहोस्, वा धार धार वा कुनाहरूको वरिपरि केबल तान्नुहोस्।
चार्जर केबललाई तातो सतहहरूबाट टाढा राख्नुहोस्।
अनप्लग गर्न, चार्जर प्लग बुझ्नुहोस्, केबल होइन।
चार्जर प्लग वा भिजेको हातले उपकरणलाई नहेर्नुहोस्।
ब्याट्री प्याक, हात रिक मा चार्ज पोर्ट र चार्जर आउटपुट छोटो सर्किट हुनु हुँदैन।
उपकरण ब्याट्री हटाउँदा ब्याट्री चार्जरबाट बिच्छेदन हुनुपर्दछ।
ब्याट्री सुरक्षित ढ disp्गले निकाल्नु पर्छ।
रिचार्ज नगर्नुहोस्, as० डिग्री सेल्सियस / १°० डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि ताप, वा भस्म गर्नुहोस्।
बच्चाहरूको पहुँचबाट बाहिर ब्याट्री राख्नुहोस्।
प्रयोग गरिएको ब्याट्रीहरूको तुरून्त डिस्पोज गर्नुहोस्।
यस उपकरणले ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ जुन केवल दक्ष व्यक्तिले मात्र बदल्न सक्छन्।
अनावश्यक सुरूवात रोक्नुहोस्। उपकरणलाई उठाउनु वा बोक्नु अघि स्विच अफ अफ स्थितिमा रहेको सुनिश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको औँलाले स्विचमा उपकरणहरू बोक्दै वा अप्वाइन्टहरू आमन्त्रित गर्दछ जुन दुर्घटनाहरूलाई आमन्त्रित गर्दछ
अपमानजनक अवस्थामा, तरल ब्याट्रीबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ; सम्पर्क बेवास्ता गर्नुहोस्। यदि सम्पर्क गल्तिले भयो भने, पानी संग फ्लश। तरल सम्पर्क आँखा, अतिरिक्त चिकित्सा सहायता खोज्नुहोस्। ब्याट्रीबाट निकालेको तरल पदार्थले जलन वा जलाउन सक्छ।
बिग्रिएको वा परिमार्जित उपकरण प्रयोग नगर्नुहोस्। बिग्रिएको वा परिमार्जित ब्याट्रीहरूले अप्रत्याशित व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्दछन् परिणामस्वरूप आगो, विस्फोट वा चोटपटकको जोखिम।
आगो वा अत्यधिक तापक्रममा उपकरण प्रदर्शन नगर्नुहोस्। अग्नि वा तापक्रम १ 130० डिग्री सेल्सियस / २266 ° एफ माथी एक्सपोजर विस्फोट हुन सक्छ।
सबै चार्जिंग निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र निर्देशनहरूमा निर्दिष्ट गरिएको तापक्रम दायरा बाहिर उपकरणलाई चार्ज नगर्नुहोस्। गलत दायरा वा तोकिएको दायरा बाहिरको तापक्रममा चार्ज गर्नाले ब्याट्री बिगार्न सक्छ र आगोको जोखिम बढ्न सक्छ।
केवल समान प्रतिस्थापन भागहरू प्रयोग गरी एक योग्य मर्मत गर्ने व्यक्तिको द्वारा सेवा प्रदान गरिएको छ। यसले सुनिश्चित गर्नेछ कि उत्पादको सुरक्षा राखिएको छ।
परिमार्जन वा उपकरण मर्मत गर्न कोशिस नगर्नुहोस् प्रयोग र देखभालको लागि निर्देशनहरूमा बाहेक।
Range-4० ° C / -40०-१०40 ° F बीचको तापक्रम दायरा राख्नुहोस् जब ब्याट्री चार्ज गर्दै, भण्डारण एकाई वा प्रयोगको बेला।
केवल DONGGUAN YINLI ELECTRONICS CO LTD, Model YLS0041-T060015 द्वारा प्रदान गरिएको चार्जरको साथ प्रयोग गर्नुहोस्।
केवल निर्माता द्वारा निर्दिष्ट चार्जरको साथ रिचार्ज गर्नुहोस्। एक प्रकारको ब्याट्री प्याकको लागि उपयुक्त एक चार्जरले अर्को ब्याट्री प्याकको साथ प्रयोग गर्दा आगोको जोखिम पैदा गर्न सक्दछ
बिजुली सकेटबाट चार्जर अनप्लग गर्नुहोस् जब प्रयोगमा छैन, सफा गर्नु अघि, मर्मत-सम्भार वा उपकरणको सेवा पुर्‍याउनु अघि, र यदि तपाईंको उपकरणसँग एक चलिरहेको ब्रशको साथ एक सहयोगी उपकरण छ, उपकरण जडान वा विच्छेदन गर्नु अघि।
यस उपकरणले ब्याट्रीहरू समावेश गर्दछ जुन गैर-प्रतिस्थापन योग्य हो।
ब्याट्री यो स्क्र्याप हुनु अघि उपकरणबाट हटाउनुपर्नेछ।
बिग्रिएको केबल वा चार्जरको साथ प्रयोग नगर्नुहोस्। यदि उपकरणले काम गरिरहेको छैन भने यसलाई छोडियो, छोडियो, क्षति भयो, घरबाट बाहिर छालियो, वा पानीमा छोडियो भने यसलाई सेवा केन्द्रमा फिर्ता गर्नुहोस्।
अनप्लग गर्नु अघि सबै नियन्त्रणहरू बन्द गर्नुहोस्।
सफा गर्नुहोस् वा सर्विसिंग गर्नु अघि बन्द गर्नुहोस्।
पावर स्विच अनको साथ मशीन अनियन्त्रित छोड्नुहोस्
यी निर्देशनहरू बचत गर्नुहोस्
यो मोडल केवल घर प्रयोगका लागि हो।
BISSELL® EasySweep buying खरीदको लागि धन्यबाद
हामी सफा गर्न मनपराउँदछौं र हामी तपाईंसँग हाम्रा एक नवीन उत्पादनहरू साझेदारी गर्न उत्साहित छौं। हामी तपाईको EasySweep आउने बर्ष को लागी नयाँ को रूप मा काम गर्न को लागी चाहानुहुन्छ, यसैले यो गाईड को लागी कसरी समस्या, समस्या निवारण को उपयोग को बारे मा सुझावहरु छ।
तपाइँको EasySwep लाई काम गर्नु अघि थोरै असेंबली चाहिन्छ, त्यसैले "असेंबली" सेक्सनमा फ्लिप गर्नुहोस् र सुरु गरौं!
इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरू अत्यधिक तापक्रम वा उच्च आर्द्रताको अधीनमा हुनुहुन्न। नुहाउने क्षेत्रमा वा स्टोभ, फर्नेस वा रेडिएटरको नजिक ईजी स्वेप भण्डारण नगर्नुहोस्।
EasySweep very लाई धेरै कम असेंबली चाहिन्छ। यसलाई बक्सबाट हटाउनुहोस् र सूचीकृत कम्पोनेन्टहरूसँग आफैलाई परिचित गर्न दृष्टान्तको बिरूद्ध जाँच गर्नुहोस्। भाग नामका साथ विस्फोट गरिएको दृश्य रेखाचित्र पनि उपयोगी हुन्छ यदि तपाईंले पछि कुनै भाग अर्डर गर्नु पर्छ भने।
गैर पर्ची पकडको साथ अनुभाग लिएर ह्याण्डल भेला गर्नुहोस् (1) र मध्य भाग जसमा प्रत्येक अन्तमा खैरो कनेक्टर टुक्राहरू छन् (2)। मध्य भाग सम्मिलित गर्नुहोस् (2) ग्रिप सेक्सनमा (1) र ठाउँ मा कस गर्न मोड्नुहोस्। अर्को, यस भेला गरिएको सेक्सन लिनुहोस् र प्वालको साथ तल भागमा घुसाउनुहोस् (3)। स्थानमा कस गर्न ट्विस्ट।
एसेम्ड गरिएको ह्याण्डल लिनुहोस् र EasySweep को माथि कुंडा कनेक्टरमा बटनको साथ तल प्वाल लाइन गर्नुहोस्। बटनमा भेला भएको ह्यान्डललाई थिच्ने बेलामा स्विवेल कनेक्टरमा बटन थिच्नुहोस्, ह्यान्डललाई स्थानमा लक गर्नुहोस्।
EasySweep प्रयोग गर्नु अघि पूर्ण चार्ज हुनै पर्छ। युनिट चार्ज गर्न, चार्जरलाई मानक इलेक्ट्रिकल आउटलेट (१२०v-h० हर्ट्ज) मा प्लग गर्नुहोस्; तपाईंको EasySweep को पछाडिको चार्जिंग पोर्टमा विपरीत अन्त प्लग गर्नुहोस्। चार्जिंग सूचक प्रकाश प्रज्वलित हुनेछ जब राम्रोसँग जडान भएको छ र पूर्ण चार्ज हुँदा बन्द हुँदैन। EasySweep अब चार्ज हुँदैछ।
यदि तपाईंको ब्याट्री अझै रिचार्ज गर्न असफल हुन्छ वा सामान्य अवधिको चार्ज राख्दैन भने, कल गर्नुहोस्:
BISSELL उपभोक्ता सेवाहरू १-1००-२800-237२7691।
सोमबार - शुक्रबार बिहान - बिहान १० बजे ईटी
शनिबार am बिहान9बेलुका T बजे
वा हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्: www.bissell.com.au
ब्याट्री चार्ज गर्दै
जब पूर्ण रूपमा चार्ज हुन्छ, EasySweep ले cleaning 45 मिनेट सफाई समय प्रदान गर्दछ।
पहिलो पटक चार्ज गर्दा, कम्तिमा १ 16 घण्टाको लागि निर्बाध चार्ज गर्न अनुमति दिनुहोस्। त्यसपछि, कम्तिमा १ hours घण्टा चार्ज गर्नुहोस् EasySweep Easy ब्याट्री पूर्ण नवीकरण गर्न। चार्जिंग सूचक प्रकाश प्रज्वलित हुनेछ जब राम्रोसँग जडान भएको छ र पूर्ण चार्ज हुँदा बन्द हुँदैन।
नोट: चार्ज हुँदा पावर स्विच बन्द स्थितिमा हुनु पर्छ।
कम अपरेटिंग समयले ब्याट्रीले एक प्रतिरोध अप निर्माण गरेको जनाउछ। रिचार्ज गर्नका लागि, पहिले ब्याट्रीलाई पूर्ण रूपमा निकाल्नुहोस्, यसलाई रिचार्ज गर्नुहोस्, र त्यसपछि दोस्रो पटक रिचार्ज गर्नु अघि फेरि यसलाई निकाल्नुहोस्। यो प्रक्रिया एक पटक भन्दा बढी आवश्यक हुन सक्छ।
जब चार्ज पूर्ण हुन्छ, चार्जरबाट EasySwep अनप्लग गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
EasySweep ले crayons, संगमरमर, र अन्य ठूला वा हार्ड वस्तुहरू लिदैन।
तपाईको EasySweep प्रयोग गर्दै
EasySweep एक चाँडो र सजिलो तरीका तपाइँको नंगे फर्श, कम ढेर रग र कालीन सफा गर्न को लागी गरीएको छ।
सामान्य प्रयोग स्थितिमा ह्यान्डललाई पछाडि टिप गर्नुहोस् र तपाईंको खुट्टाको साथ स्वीपरमा पावर स्विचलाई ट्याप गर्नुहोस्।
नोट: डर्ट बिन ढोका बन्द नभए पनि युनिट चल्नेछ।
ह्यान्डलले तपाईको खाली तल्लाहरू, कम ढेर रगहरू र कार्पेट सफा गर्न सजीलो पैतृकका लागि swivels।
काम सकिसकेपछि, अर्को खुट्टाको साथ पावर स्विच ट्याप गरेर अर्को प्रयोगको लागि भण्डार गर्नुहोस्।
मर्मत र हेरचाह
डर्ट बिन खाली गर्दै
डर्ट बिन प्रत्येक प्रयोग पछि खाली गर्नुपर्दछ।
निश्चित गर्नुहोस् कि EasySweep ™ "बन्द" स्थितिमा छ।
फोहोरमा युनिको आधार होल्ड गर्नुहोस् खालीमा।
डर्ट बिन रिलीज बटन थिच्नुहोस् र कचराको डिब्बामा सामग्री खाली गर्नुहोस्।
नोट: डर्ट बिन EasySweep को तलबाट खुल्छ
डर्ट बिन ढोका बिस्तारै पछाडि ठाँउमा फर्काउनुहोस्।
सफा बाहिरी सतहहरू सफा कपडाले मात्र पानीले नुहायो। कडा डिटर्जेंट वा अन्य क्लीनर प्रयोग नगर्नुहोस् - यसले समाप्तलाई क्षति पुर्‍याउँछ। सतह सफा गर्नु अघि जहिले पनि चार्जरबाट EasySwep अनप्लग गर्नुहोस्
तलका निर्देशनहरू हेर्नुहोस् ब्याट्रीहरूको निपटान गर्नका लागि उनीहरूले ब्याट्रीको जीवन पार गरेपछि
यस उत्पादनले एक निकल क्याडमियम (नी-सीडी) रिचार्जेबल ब्याट्री प्याक समावेश गर्दछ। संघीय र राज्य नियमावली अनुसार, Ni-CD ब्याट्रीहरूको हटाउने र उचित विसर्जन आवश्यक छ। तपाईंको EasySweep मा ब्याट्री प्याक हटाउनका लागि, तल निर्देशनहरू हेर्नुहोस्
महत्वपूर्ण: चार्जर अनप्लग गर्नुहोस्।
ह्यान्डल हटाउनुहोस् त्यसपछि स्वीपरको तलबाट4व्हीलहरू pry गर्नुहोस्।
चित्रमा देखाइएको अनुसार तल आवरणमा फिलिप्स हेड स्क्रू हटाउनुहोस्।
शीर्ष र तल्लो कभर अलग गर्नुहोस्।
ब्याट्री प्याकबाट तार जडानकर्ताहरू हटाउनुहोस्।
ब्याट्री प्याक सँगै राख्नुहोस् - व्यक्तिगत ब्याट्री अलग नगर्नुहोस्। ब्याट्रीहरूको विशिष्ट निपटान निर्देशनहरूको लागि, कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्: आरबीआरसी (रिचार्जेबल ब्याट्री रिसाइक्लिंग कर्पोरेशन) १-1००-800२२-822 वा www.rbrc.com भ्रमण गर्नुहोस् उत्पादको बाँकी छोड्नुहोस्।
सावधानी: ब्याट्री विच्छेदन गर्दा उपकरण नष्ट हुन्छ र वारेन्टी अवैध हुन्छ।
समस्या सम्भावित कारणहरू उपचार
कुनै शक्ति छैन डर्ट बिन भरिएको हुन सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि EasySweep राम्रोसँग सिफारिश गरिएको समयको लागि आउटलेटमा प्लग गरिएको छ।
EasySweep अपरेटिंग तर मेस उठाउँदैन डर्ट बिन भरिएको हुन सक्छ। खाली डर्ट बिन
डेब्रीस इजीस्वेपमा दर्ता गर्न सकिन्छ वा सफाईकर्ताले लिनको लागि धेरै नै भारी हुन सक्छ डर्ट बिन खाली गर्नुहोस् वा EasySweep को साथ ठूला वस्तुहरू उठाउनबाट जोगिनुहोस्।
डर्ट बिन ढोका खुल्दैन डर्ट बिन ढोका र तल्लो कभर बिचमा फोहोर जाम खाली हुन्छ खाली ठाउँलाई राम्रोसँग सफा गर्नुहोस् ताकि डर्ट बिन ढोका सजिलै खस्कन सक्दछ।
डर्ट बिन रिलीज बटन काम गर्दैन डर्ट बिनमा डर्ट बिल्ड अप इकाईको तल्लो भागमा डर्ट बिन रिलिज ढोका र एकै समयमा एकाईको शीर्षमा रिलिज बटन थिच्नुहोस्।
म्यानुअलमा समावेश नभएको अन्य मर्मतसम्भार वा सेवा आधिकारिक सेवा प्रतिनिधिद्वारा गरिनु पर्दछ।
BISSELL उत्पादन छान्नु भएकोमा धन्यबाद।
यो ग्यारेन्टीले तपाईंलाई विशिष्ट कानुनी अधिकार दिन्छ, अधिकारहरूको साथसाथ तपाईं अष्ट्रेलियाली उपभोक्ता कानून अन्तर्गत हुन सक्दछ। यदि तपाईंलाई यस ग्यारेन्टीको बारेमा अतिरिक्त निर्देशनहरू आवश्यक छ वा यसले के कभर हुन सक्छ भन्ने बारेमा प्रश्नहरू छन् भने कृपया तल सेट गरिएको विवरणहरूमा तपाईंको स्थानीय BISSELL उपभोक्ता सेवाहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्।
सीमित १ वर्ष ग्यारेन्टी (मूल खरीददार द्वारा खरीद मितिबाट)
तल दिइएको * CONDITIONS को बिषयमा, BISSELL मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्दछ (नयाँ, नविकरण गरिएको, हल्का प्रयोग भएको, वा पुनर्मित अवयवहरू वा उत्पादनहरूसँग), BISSELL विकल्पमा, नि: शुल्क, कुनै दोष वा खराबी कारण निर्माता दोषको कारण। यो ग्यारेन्टी व्यक्तिगत उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिएको उत्पादनमा लागू हुन्छ, र व्यावसायिक वा भाँडा सेवा होईन। यो ग्यारेन्टी प्रशंसकहरू वा नियमित मर्मतसम्भार वा उपभोग्य कम्पोनेन्टहरू जस्तै फिल्टर, बेल्ट, ब्रश रोल, आदिमा लागू हुँदैन, लापरवाही, दुरुपयोग, उपेक्षा, अनधिकृत मर्मत, वा प्रयोगकर्ता गाईडको अनुरूप नभएको अन्य कुनै प्रयोगले गर्दा हुने क्षति वा खराबीको कारण। । BISSELL ले सिफारिस गर्दछ कि मूल प्याकेजि the्ग ग्यारेन्टी अवधिको अवधिको लागि राखियो यदि यस्तो आवश्यकता ग्यारेन्टी अवधि भित्र आउँदछ कि वस्तुलाई पुन: प्याकिंग र यातायात आवश्यक छ। यो ग्यारेन्टीका सर्तहरू पूरा गर्नका लागि तपाईंको केहि व्यक्तिगत जानकारीहरू प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दछ, जस्तै मेलिंग ठेगाना। कुनै पनि व्यक्तिगत डेटा BISSELL को गोपनीयता नीति को अनुसरण गरेर ह्यान्डल गरिनेछ, जुन फेला पार्न सकिन्छ www.BISSELL.eu.
* ग्यारेन्टीका सर्तहरू
यदि त्यस्तो नोक्सानी उचित रूपमा देखिन सकिने विषय हो भने, BISSELL र यसको देशभित्र वितरकहरू यस उत्पादनको प्रयोगसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकृतिको आकस्मिक वा परिणामी क्षतिको लागि जिम्मेवार हुँदैनन्।
केवल अस्ट्रेलियाली उपभोक्ताहरूको लागि:
हाम्रो सामानहरू ग्यारेन्टीहरूसँग आउँदछन् जुन अष्ट्रेलियाली उपभोक्ता कानून अन्तर्गत समावेश गर्न मिल्दैन। तपाईं प्रतिबिम्ब वा प्रमुख असफलताको लागि र अन्य कुनै पनि व्यावहारिक पूर्वानुमान हानि वा क्षतिको क्षतिपूर्तिको लागि प्रतिपादित हुनुहुन्छ। तपाईं पनि राम्रो प्रतिपादित वा प्रतिस्थापन गर्न योग्य हुनुहुन्छ यदि सामानहरू असफलताको योग्यतामा असफल हुन्छन् र असफलता ठूलो असफलतामा परिमार्जित हुँदैन।
यस ग्यारेन्टी कानून अन्तर्गत अन्य अधिकार वा छुटमा थपिएको छ। यस ग्यारेन्टी बाहेक केही छैन, कानून वा सीमित वा आधुनिक कुनै पनि उपभोक्ताको कुनै पनि उपभोग उपलब्ध छ जसलाई कानूनले अनुमोदित गरेको छ भने कुनै पनि उत्तरदायित्वको सीमितता वा मोडिट। यो ग्यारेन्टी सम्पर्क बिस्सेल अस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (विवरण तल) अन्तर्गत दाबी गर्न। कुनै पनि सामान फिर्ता गर्न BISSELL PRIOR सम्पर्क गर्नुहोस्। जहाँ सहमति गरिएको छ, BISSELL REISBUSE REASONABLE POSSTAGE / HANDLING COSTS (यदि कुनै हो) BISSSL मा सामान फिर्ता गर्नका लागि। दाबी गर्न यस ग्यारेन्टी कृपया दाबी गरिएमा दाबी गर्न ई-मेल वा पोष्ट द्वारा व्यय प्राप्त गर्ने एक प्रतिलिपिको साथ बाइबल प्रदान गर्नुहोस्।
यदि तपाइँको BISSELL® उत्पादन को लागी सेवा चाहिन्छ वा हाम्रो सीमित ग्यारेन्टी अन्तर्गत दावी गर्न आवश्यक छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:
वेबसाइट र ईमेल:
BISSELL अस्ट्रेलिया PTY लिमिटेड R२ रोक्को डा। Scoresby 42१3179 Vict भिक्टोरिया अष्ट्रेलिया
प्रतिस्थापन पार्ट्स र सामान खरीदका लागि उपलब्ध छन्।
यात्रा खरीद गर्न www.BISSELL.com.au.
Bissell 15D1 श्रृंखला सजिलो स्वीप उपयोगकर्ता गाइड - डाउनलोड गर्नुहोस् [अनुकूलित]
Bissell 15D1 श्रृंखला सजिलो स्वीप उपयोगकर्ता गाइड - डाउनलोड
बिस्सेल २2880० सीरीज उत्तम स्वीप टर्बो उपयोगकर्ता गाइड बिस्सेल २2880० सीरीज उत्तम स्वीप टर्बो उपयोगकर्ता गाइड २2880० सेरिएस ...
Bissell 46B4 श्रृंखला स्टीम र स्वीप प्रयोगकर्ताको गाइड इनाम पुरस्कार पोइन्टहरू आज तपाईंको नयाँ उत्पाद दर्ता गर्नुहोस्! पछाडि ...
Bissell 46B4, 92L2 श्रृंखला स्टीम र स्वीप प्रयोगकर्ताको गाइड Bissell 46B4, 92L2 श्रृंखला भाप र स्वीप प्रयोगकर्ताको गाइड धन्यवाद ...
Bissell 2483 श्रृंखला कडा स्वीप मैनुअल स्वीपर उपयोगकर्ता गाइड Bissell 2483 श्रृंखला कडा स्वीप मैनुअल स्वीपर उपयोगकर्ता गाइड असेंबली ...
बिस्सेल २2484। सीरीज इजी स्वीप कम्प्याक्ट स्वीपर म्यानुअल बिस्सेल २2484 सीरीज इजी स्वीप कम्प्याक्ट स्वीपर मैन्युअल - डाउनलोड गर्नुहोस् ...
बिस्सेल २ 2986। Series श्रृंखला एयरोस्लिम प्रयोगकर्ता गाइड बिस्सेल २ 2986 XNUMX Series श्रृंखला एयरोस्लिम महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशहरू सबै निर्देशहरू पढ्नुहोस् ...
पोस्टएक्सेलसीयर मार्च 21, 2021 अप्रिल 9, 2021 पोस्टबिस्सेल्लटैग: बिस्सेल्ल, Bissell 15D1 श्रृंखला, सजिलो स्वीप
बिस्सेल 6221२२१ सीरीज वेग प्रयोगकर्ताको मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्‍यो
बिस्सेल १1797 Series Series सीरीज पावरफोर्स हेलिक्स टर्बो रिवाइन्ड भ्याकुम प्रयोगकर्ता गाइड
पल बौरासा भन्छन्:
जुन 3, 2021 8 मा: 19 बजे
ब्यासेल ​​१DD१ का लागि ब्याट्री प्याकको मूल्य के हो
र म तिनीहरूलाई कहाँ शेरब्रुक क्युबेक क्यानाडामा बिदा गर्न सक्छु
ULINE डिजिटल कुञ्जी क्याबिनेट प्रयोगकर्ता म्यानुअल
शेर ब्रान्ड ऊन-सहज मोटा र द्रुत Go Faux LB संग्रह पचास फिफ्टी उपयोगकर्ता पुस्तिका
Bissell पालतू कपाल इरेज़र स्लिम कर्डेड निर्देश
eltax Vintage PWR 1959 निर्देशनहरू
nedis USB क्यासेट एडाप्टर प्रयोगकर्ता म्यानुअल
Lefteris on Logitech G733 हेडफोन उपयोगकर्ता पुस्तिका
ह्युगो स्टिग्लिट्ज on Ankway सौर क्यामेरा एपीपी उपयोगकर्ता गाइड
मार्शमालो on इनपडहरू १२ प्रयोगकर्ता म्यानुअल
Gina on iTime Wearfit २ स्मार्ट ब्रेसलेट उपयोगकर्ता पुस्तिका
फ्रैंक आर्थर on Occiam ब्लूटूथ हेडफोन उपयोगकर्ता पुस्तिका